Iindaba -Ukuze ucombulule imeko yokuthunyelwa kwezihlangu eTshayina e ……
IBHODI ENONWOVEN INSOLE
IPHEPHA LENCWADANA YEPHEPHA
YOKUFUNDA IBHODI YENKQUBO
IIMPAWU ZOOTI NOKUQHELEKA
IPHEPHA LOKUQHUTYELA UMNTU
Ukuze kusonjululwe imeko enzima yokuthumela kwelinye ilizwe kwishishini lezihlangu lase China kwi ……
Ukuze kusonjululwe imeko yokuthunyelwa kwezihlangu eTshayina kwiminyaka yakutshanje kunye nokuphonononga ukuzithemba kukhuphiswano, iXinlian Shoes Supply Chain Co, Ltd. kunye neShoedu Real Estate Development Co, Ltd. ngokudibeneyo benze unikezelo lwezihlangu ezikwi-intanethi nangaphandle. intengiselwano yentengiselwano yendalo—— IZiko lase China loThengiso lweziXhobo zokuThengiswa kweZihlangu (apha ekuthiwa yi "Ziko loRhwebo"). Le projekthi ijolise ekudibaniseni izibonelelo zeshishini lezihlangu, ukukhuthaza ngokunzulu inguqu kunye nokuphuculwa komxokelelwano wemizi-mveliso yezihlangu eTshayina, ukwenza indawo yokurhweba ecosystem egxile ekuboneleleni ngezihlangu, nokwandisa umhlaba ochumileyo worhwebo lwamanye amazwe.
Kuxelwe ukuba iZiko laseShayina lokuThengiswa kweShishini lokuThengiswa kweziThuthi libekwe kwiindonga zoMlambo iFeiyun eWenzhou · Ruian, idolophu yephondo yaseRui'an phesheya kweDolophu yaseTshayina yoRhwebo kunye nesiqalo esithi "Qiao" kwiPhondo laseZhejiang, kwaye ikwindawo "umnqamlezo wegolide" kaloliwe, isantya esiphezulu nohola wendlela wesizwe. Isigaba sokuqala sinendawo yokwakha emalunga ne-100,000 yeemitha zesikwere, egubungela iipaneli ezinkulu ezine zezixhobo zezihlangu, izihlangu zamadoda, izihlangu zabafazi, kunye nezihlangu zabantwana. Ineziko lemiboniso yezihlangu lophawu lwamazwe aphesheya, iziko lophawu, uphando kwezobuchwephesha kunye neziko lophuhliso, iziko lenguqu kwimpumelelo, kunye nezixhobo ezikrelekrele Iindawo ezintlanu ezikhethekileyo zeli ziko zidibanisa iziko losasazo elidumileyo kwi-Intanethi, indalo yabantu e-commerce, kunye ezinye izinto ezixhasa ushishino, kunye neendawo zokuxhasa uluntu ezinje ngamaziko okutya kunye neeholo ezinkulu zesidlo, ukwenza isiseko soku-odola kwidijithali esinezihlangu.
Okokuqala, iZiko laseShayina lokuThengiswa kweShishini lokuThengiswa kweziXhobo lidibanisa amaqonga amabini akwi-intanethi ngokuzimeleyo aphuhliswe ngu-Xinlian E-commerce, iqonga lenkonzo ebanzi lokubonelela ngezihlangu "Shoe Netcom" kunye nentengiso yamazwe aphesheya kunye neqonga lokuthumela kumazwe angaphandle kwishishini lezihlangu "Urhwebo lwezihlangu Izibuko ”ngokusebenzisa amaqonga amabini Ukuxhobisa iziko lezorhwebo, ukwakha imodeli entsha yeshishini kwi-Intanethi +, ubeke yonke inethiwekhi, kwaye uvule ukunyuka nokuhla komxokelelwano weshishini lezihlangu ukusombulula i-asymmetry yolwazi lwezixhobo kwishishini lezihlangu. .
Okwesibini, iZiko laseTshayina lokuThengiswa kweShishini lokuThengisa iZakhiwo lakhe intengiso yokuthengisa ngaphandle kweintanethi ye-100,000 yeemitha zesikwere. Kumgangatho wesine wesakhiwo esiphambili sendawo yokurhweba, indawo yokubonisa izihlangu igcinwe, kwaye iziko lokubonisa izihlangu kwihlabathi lonke liza kwakhiwa ngokubamba iindibano zemiboniso rhoqo ngonyaka. , Ukwenza icandelo lezicathulo ukuhlanganiswa kwendalo. Phakathi kwabo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngenkxaso eyomeleleyo yeZiko eliManyeneyo loPhuhliso loShishino eShanghai iZiko lezeNzululwazi neTekhnoloji kunye noRhulumente waseMasipala waseRuian, iziko lezorhwebo liza kubamba imisitho emibini minyaka le, iGlobal Light Industrial Commodities (Shoes) I-China (i-Ruian) i-Expo kunye nenkomfa yokuthengwa kwempahla yezihlangu. Rhoqo mema abathengi behlabathi, dibanisa abathengi baphesheya, abathengi abakhulu, iimveliso ezaziwayo kunye neqonga le-e-commerce, njl., Ukwenza iwindows yokurhweba kwiinkampani zezihlangu zaseTshayina kunye nabathengi bamanye amazwe.
Okokugqibela, iZiko laseShayina lokuThengiswa kweeTyhuthi lisebenzisa iziseko ezine njengendawo yenkxaso yokuphucula ishishini lezihlangu.
Eyokuqala sisiseko semveliso, semfundo kunye nophando apho iitalente kushishino lwezihlangu zihlanganisanayo: uphando lwezobuchwephesha kunye neziko lophuhliso, indawo yokuguqula impumelelo, iziko loyilo lweepatheni, iziko elenza ipatheni yezihlangu, umanyano lwezihlangu zepropathi enomgangatho ophezulu, njl njl. IZiko lezeNzululwazi neTekhnoloji ye-R & D lijoyina izandla kunye neenkcukacha zezihlangu ukwandisa umxholo wezobuchwephesha kwiimveliso ngokwenza izihlangu zibe kwidijithali; IZiko loYilo lweSampuli yezihlangu limema amaqela angama-600 ayiliweyo kunye nabaqulunqi bezihlangu abanamagama amakhulu kwilizwe liphela ukuba benze umanyano lomyili wezihlangu kwilizwe liphela ukunceda iimveliso zeenkampani zezihlangu.
Okwesibini sisiseko sokusasaza esidumileyo sabadumileyo abakwi-Intanethi esinceda iinkampani zezihlangu ekutsaleni nasekunyuseni ukuthengisa. Ngokutya kunye nokusasaza bukhoma kosaziwayo, banokuzisa izinto kwiimveliso zezihlangu zeshishini.
Okwesithathu sisiseko somenzi we-e-commerce, ukuthengisa nge-intanethi kunye nokuthengwa kwangaphandle ngaxeshanye, ukwabelana ngamajelo amaninzi.
Inqanaba lesine linqanaba lentsebenziswano yesicwangciso sangaphandle sokuxhasa iinkonzo, ezinje ngokwakhiwa kwetekhnoloji ye-blockchain yezemali kunye neBhanki yaseNingbo ukusombulula iingxaki zokufumana imali enzima kwaye ibiza kakhulu kumashishini amancinci naphakathi, ukuququzelela ukujikeleza kweemali zorhwebo, kunye nokuvuselela ikhonkco eliyinkunzi.
Ngamafutshane, iprojekthi yeZiko laseShayina lokuThengiswa kweShishini lokuThengisa iZikhonkwane isekwe “kumaqonga amabini akwi-intanethi + kwintengiso ye-100,000 yeemitha ezisikwere yokuthengisa + N yokuthengisa ii-odolo” ukufezekisa isihloko se "global shoe smart digital ordering" esidibanisa kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi . Ukulungiselela ukwenza ubonelelo lwezihlangu kwihlabathi liphela.
Ixesha lokuposa: Aug-25-2020
Ukuze kusonjululwe situa kumazwe angaphandle ...
Ukupakisha ngumqulu. ngaphakathi kwe-polybagbag ene-o ...
Kwi "ukunyuka kwamaxabiso" kwep ...
Idilesi: Indawo yaseXingjin yezeMizi-mveliso yeNanyang Road eShiian kwiPhondo leFujian China
Ibhodi ye-Insole Board ene-Eva, Ilaphu nonwoven elaminethiweyo kunye Eva Foam, Inaliti Punch Nonwoven Ilaphu, Iphepha lezinto ze-Shoe Insole, Ilaphu elingenagwele kunye noEva, Ibhodi ye-Insole noEva,